scaffold jack base ho an'ny ringlock, cuplock na H frame sns.
Ny fampiharana ny jack base: Ampiasaina amin'ny fantsom-by sy scaffold amin'ny vy izy io amin'ny fizotran'ny fananganana mba hanitsiana ny haavon'ny scaffolds sy ny firafitry ny fantsom-pohy, ny lanjan'ny fandanjana ary ny fitondrana entana. Ampiasaina indrindra amin'ny dingan'ny fanamboarana fandrotsahana simenitra fananganana. Miaraka amin'ny fampivoarana haingana ny trano sy ny fitaterana telo habe tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny habetsaky ny tafo fanohanana dia nanao fandrosoana haingana ihany koa. Fanasokajiana ny jack jack: 1. Araka ny ampahany ...
1.Fampidirana scaffold an'ny Luowen HDG dia nomena andraikitra mavesatra (675 kg's) ary mety amin'ny varotra rehetra ao anatin'izany: Bricklayers, demolition, mpandrafitra, mpanao trano vato, mpanamboatra vy sns 2.Fitaovana 1. Izy io dia safidy tsara ho an'ny mpanorina trano izay te hividy ny scaffold ny tenany ary hitahiry vola. 2.Ny lanja maivana - Maika haingana ny atsangana - Azon'ny olona iray hapetraka - Efa vita mialoha! - Ireo rehetra ireo dia mamonjy fotoana sy vola. 3. Ireo mpanao trano tia ...
Kwikstage Scaffolding Each Standard has a 500mm spigot and the 'V'-Pressings are at 495mm centres and give location points for Ledgers and Transoms. Ny Quality Kwikstage dia novokarina tamin'ny fenitra iraisam-pirenena ao anatin'ny tontolo iantohana ny kalitao ISO 9002 ary misy tombo-kase ho an'ny fiarovana sy tanjona antoka ny kalitao. Tsotra sy mahomby amin'ny fividianana singa 4 lehibe fotsiny, tsy misy fittings malalaka, fitehirizana, fitaterana ary fivorian'ny Kwikstage dia extre ...
1.Fampidirana Luowen Ring Lock Scaffold dia karazan-tsakafo vaovao, mazàna vita amin'ny takelaka Ring, standard, ledger, brace ary kojakoja, dia raisina an-tsena eto amin'ny tsena manerantany, noho ny tombony sy ny fampiharana be dia be. 2.Feature 1. Structure tsotra: ny ampahany lehibe dia misy ny fenitra, boky, mora ny mivory sy manala azy, ary koa mora ny mitahiry, mamindra ary mitazona. 2.Mora amin'ny fametrahana azy: misy lavaka 8 amin'ny takelaka peratra, ka ny bokotra sy ny brace dia afaka mampiditra i ...
1.Introduction: Luowen CupLock Scaffolding dia karazana scaffold vaovao, izy io dia dinihina, noforonina ary namboarina nanondro ny haitao ivelany miharo ny kojakoja sy kojakoja, tsara kalitao sy fampiharana. 2.Fitaovana ： rafitra 1.Simple: ny ampahany lehibe dia misy ny fenitra, ny birao ary ny fanamafisana, mora ny mivory sy manala azy, ary koa mora ny mitahiry, mamindra sy mitazona. 2. Fiarovana sy filaminana: ny kaopy ambony dia misy ny fikorontanana amin'ny fahotana sy ny fahasarotan'ny tenany, mety hidin-tena izy io, ...
H20 hazo hazo (pilar multilayer tranokala ary misy lohany plastika) Luowen H20 hazo hazo somary maivana, mahazaka avo lenta, tena tsara amin'ny tantera-drano, asidra-porofo, alkali-proof, mahitsy. Toetra mampiavaka azy: 1 Weight Mavesatra maivana: ny hakitroky ny hazo H20 hazo dia 4.5kg fotsiny isaky ny metatra, mora ny manala 、 mandrava sy mametraka. 2 ac Fahamafisana avo lenta: Ny hazo H20 dia tsy mora tapahina noho ny fibre. 3, fanaporofoana tsara: ny hazo hazo H20 dia tsara amin'ny famonoana rano, tsy mahazaka asidra, alkaly ...
Fampidirana ny vokatra Luowen 120 Steel Frame Formwork System dia mazàna vita amin'ny vy, takelaka vita amin'ny plywood, bracket scaffold, coupler, valder valer, rodina fatorana, fananganana hookformwork, clamp vy ary prop propter-push, sns 1. Ny vy formwork dia 18mm plywood matevina rakotra vy poaka. 2. Miorina mafy ny endriny, ary ny fiasan'ny rindrina dia mahazaka tsindry avy eo 60KN / m2 raha toa ka 80 80 / mm ny refin'ny tsanganana 3. Amin'ny maha rafitra namboarina ho azy, dia malefaka ny miangona, mamita ...
Famaritana 1. lanja: 15KG / metatra toradroa eo ho eo 2. Fitaovana: kofehy PP + fitaratra + Nilon 3. Composition: Panels,, tantana 4. Averina: mihoatra ny 100 heny 5. Sariaka ara-tontolo iainana: Eny 6. mari-pana fanodinana hafanana: Ambony 150 diplaoma Celsius 7.Ampiorio ary esory: Mora sy haingana 8.Certification: CNAS Test 2.Column habe: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm Haavo ny tontonana: 750mm 3.Materaly sy ny firafitra 1.Materaly: PP + kofehy vera + Nilon 2. Rafitra: takelaka, zorony, kofehy ary kojakoja 4.Fandraisana 1.Faharetana maharitra & ...
Antsipirihany: 1. lanja: manodidina ny 15KG / metatra toradroa 2. Fitaovana: kofehy PP + fitaratra, ary tahony Nilon 3. Composition: Panels, zorony, fitoeran-tànana ary kojakoja 5. Averina: mihoatra ny 100 heny 6. mari-pana deformation termal: Ambony 150 degre Celsius 7.Ampivondrona ary esory: Mora sy haingana 8.Certification: CNAS Colour Test Colony: Avy amin'ny 200 * 200mm ka hatramin'ny 600 * 600mm, habe bebe kokoa toy ny etsy ambany tabilao: Fitaovana sy ny firafitra 1.Materaly: kofehy fitaratra PP + 2.Srafitra ： panneaux , zoro, tantanana ary kojakoja endri-javatra 1.Long ...
Volavola hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo kesy, andry hazo ary vy vy. Amboary ny hazondamosina amin'ny hazo amin'ny hazo amin'ny alàlan'ny fanindronana visy ampifandraiso amin'ny vatan-kazo amin'ny alàlan'ny fametahana flange dia mora ny manangona, manala ary manamboatra ny toerana. Mavesatra ny lanjany ary mety amin'ny fanamboarana sy fitaterana. Ny fanamboarana koa dia tena sariaka amin'ny tontolo iainana. Ny plywood dia manana fampisehoana tonga lafatra. Ny tabilao dia manana permeability rivotra sy rano azo entina, ny vita ...
Famolavolana tsanganana plastika
Product InroductionA ny orinasanay dia namolavola vokatra vaovao, pp fantsom-pirazanana vita amin'ny fitaratra fibre lava, amin'ny alàlan'ny fampiasana polypropylene ho fitaovana fototra, fibre fitaratra manamafy ny fonosana ary ny bobongolo manindry endrika. Ny rafi-pandrafetana dia misy endriny 65 farafahakeliny formwork sy 65 vita amin'ny aliminioma. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fitambarana fifandraisana isan-karazany mba mahazaka ny enta-mavesatra fananganana. Ny vidiny ambany sy ny fandidiana tsotra no tombony lehibe indrindra amin'ny pp fibre vera lava ...
Wall & Slab plastika formwork
FAMPANDROSOANA FORMWORK ABS PLASTIC: 1.LIGHT Ny tontonana maivana dia azo antoka, mora ampiasaina ary mamokatra kokoa. Zava-misy ny fanesorana matetika ireo fitaovana mavesatra ary miteraka havizanana sy ratra. Ny zhongming plastika vita amin'ny zhongming dia milanja 17 kg / m2 eo ho eo ary tsy misy singa tokana mavesatra noho ny 13 kg: midika izany fa ny rafitra iray manontolo dia azo ampiasaina amin'ny tanana foana, amin'ny toe-javatra rehetra. Tsy ilaina intsony ny fandidiana ny crane, manome fahafaha-mandanjalanja kokoa ireo tranokala fanorenana raha tsy misy marimaritra iraisana amin'ny fahasalamana sy fiarovana 2.F ...
Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Sifotra amin'ny fantsom-by vy, Fehikibo Scaffolding Ringlock, Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Jack screw azo ovaina, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana,